कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु : डा. राजभण्डारीले लगाए पहिलो खोप - Lekhapadhi देश : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु : डा. राजभण्डारीले लगाए पहिलो खोप
लेखक : लेखापढी १४ माघ २०७७, बुधबार ११:०३ मा प्रकाशित
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रुपमा एकैपटक काठमाडौंका ११ वटा अस्पतालमा खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
अभियान उद्घाटनलगत्तै नेपालमा कोरोनाको पहिलो खोप काठमाडौंको टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोनाविरूद्ध खोप कार्यक्रम अभियानमा पठाएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएका छन्। आज पहिलो दिनमात्रै १२ हजारले यो खोप लगाउने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
नेपालमा भारतको सेरम इन्सटिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप प्रयोग गरिएको हो । अनुदानमा उपलब्ध यो खोप भारतमा ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ ।